Trump oo gaarey UK, jawaab kululna siiyey duqa London
LONDON, UK – Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa ka degay garoonka Stansted Airport, ee dhaca waqoyga London, isaga oo ay waday diyaaradda Air Force One.
Trump oo ay wehliyaan mas'uuliyiin kale ayaa waxaa si diiran u soo dhaweysay boqoradda Ingiriiska oo la filayo in uu kulamo lagu adkeynayo xiriirka labadda dowladood ay yeeshaan.
Kahor inta uusan cago dhigan, Trump ayaa Twitter-ka waxa uu uga jawaabey weerarkii cuslaa ee uga yimid duqa magaaladda caasimadda ah ee London, Saadiiq Khan, kaasoo haysta diinta Islaam-ka.
Hogaamiyaha Mareykanka ayaa "nin lagu khasaarey" ku sifeeyay Khan, oo aad loogu bartay mid naqdiya siyaasadda Trump.
Madaxweynaha ayaa xusay in uu "shaqo xun" qabtay duqa, kaasoo dhowr jeer holac kusii shiday dagaalka kala dhaxeeya Donald Trump.
Aadii, Khan ayaa maqaal uu qoray waxa uu ku sheegay in Trump uu lamid yahay xisbiyada midigta fog ee dhaqamada Faashiistayaashii qarnigii 20aad ku raadiya shacbiyad iyo taageero.
"Sadik Khan oo shaqo xun qabtay intii uu ahaa duqa London koontada loogu daray, ayaa si nacasnimo u fasiray booqashada madaxweynaha Mareykanka oo muhiim u ah Boqortooyada Ingiriiska. Isaga waa dhagax-qaboobay oo khasaarey. Diirada ha saaro dambiyada London, ma ahan aniga," ayuu yiri Trump.
Socdaalka Trump ee Ingiriiska oo ay ku wehliso xaaskiisa Melina Trump kaasoo qaadanaya saddex maalmood ah ayaa kusoo beegmaya iyadda oo UK ay ka jirto khalalaaso ku saabsan ka bixitaanka Midowga Yurub.
Amaanka Duqa London oo sare loo qaaday kadib hanjabaado dil ah
Caalamka 13.05.2019. 10:04
Tani ayaa imaaneysa xili Xildhibaanada dumar ah dhankooda loogu goodiyey kufsi.
Duqa London oo weerar afka ah ku qaadey Trump kahor socdaalka UK
Caalamka 03.06.2019. 08:12
Qodobada looga hadlay kulanka Shariif iyo Swan oo la shaaciyey
Soomaliya 30.01.2020. 14:33
Maxkamad xukun ku riday Aas-aasaha shabakada WikiLeaks
Caalamka 01.05.2019. 14:08